Akhriso; Qodobada ay ku heshiiyeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble - Jowhar somali news leader
Akhriso; Qodobada ay ku heshiiyeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble
By Mahad	 Last updated Oct 21, 2021
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ka heshiiyay khilaafkii u dhaxeeyay, iyadoo Wasiira Amniga C/llaahi Maxamed Nuur uu sii haayo xilkiisa, halka Yaasiin Farey uu Kusimaha Taliyaha NISA uu noqonayo, inta Taliye cusub laga soo magacaabayo Taliye cusub, Bashiir Goobe ayaa Wasiiru Dowle loo magacaabayo.Kiiska Ikraan Tahliil waxaa looga dambeynayaa Hey’addaha Garsoorka.
Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahaim Macallimuu, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in lagu heshiiyay qodobadan hoos ku qoran;
1- In ayada oo la eegayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, ay madaxda isku raaceen in la dardar geliyo howlaha doorashooyinka.
2- Inay si buuxda u wada shaqeyeaan hay’adaha amniga dalka, si loo sugo amniga doorashada loogana hortago kooxaha argagixisada.
3- In wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa, oo aanay waxba iska beddelin.
5- In Yaasiin Farey uu ahaado sii-hayaha xilka taliyaha NISA, inta uu Farmaajo kasoo magacaabayo taliye cusub oo lasoo marsiinayo Golaha Wasiirada, si ay u ansixiyaan.
6- In kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay’adaha caddaaladda iyo garsoorka.
Ugu danbayn, Madaxda Qaranku waxay umahad celiyeen Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xassan Moxamed (Lafta gareen) iyo masuuliyiinta kale ee udhabar adaygay sidii madmadowgii madaxda qaranka ka dhexjirey loogu dhameyn Lahaa Isfahan iyo afgarad, doorashaduna usocoto si habsami leh.
Madaxda waxa ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xunyihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyaga oo u ballanqaaday shacabka in si midnimo leh ay uga wada shaqayn doonaan sidii ay dalka uga dhicilahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka.